Posted by Gishe Abdi Wako on March 1, 2015
Haalli jaarmaa ABO waliigalattii fi haalli hooggana ABO yeroo ammaa addatti ilaalameera. Jaarmaan keenya jajjabeeffamee waldhuunfannoon qabsoon keenya diina haadhoo irratti aggaammatee socho’aa jiraachuun hubatame.
Hir’inaa fi laafina mul’atan guuttannee fi sirreeffannee caasaan Dhaabaa martinuu dirqama ofii shaffisaa fi gahummaan akka fiixa- baasan qindoominni barbaachisu godhame.
Isaan keessaa hangi yaroonis: ummata keenya sababaa xixinnoo adda addaa uumuun hiraarsuu fi hidhaatti guuruu, lafa isaa fudhatuu fi gurguratuuf beenyaa malee qe’ee isaa irraa buqqisuun ummanni akka godaanee biyyaa bahu ykn karaa irra bulu gochuu, master plan “Addis Ababa”f yaade hojii irra oolchuutti gamuu fi miidhama dinaggee fi siyaasaa ummata Oromoo irraan gahuu bira kutee eenyummaa fi aadaa sabichaa balleessuu fi Oromiyaa cicciruu, ummataa fi barattoota mirga isaanii falmachuuf nagaan hiriiran rasaasaan fixuu fi hidhuu, barattoota Oromoo Yunvarsitootaa fi Koollejjoota adda addaa keessaa arihuu, Oromoo fi ummatoota biraa walitti buusuun diinummaan akka gidduu isaanitti babal’atu beenzina itti firfirsuu, warra keessa hin beeknetti dimokraatawaa of fakkeessuuf akkuma baretti aangoo irra of tursuuf filmaata shiraan guutamee fi farra-dimokiraasii tahe geggeessuuf jaarmota siyaasaa biyyattii biroo fi ummata sodaachisuu fi jeequutti bobbahuu faa dha.
Hafuurri tokkummaa fi hamileen qabsoo Dhaaba keenya keessatti mul’achaa jiru waltajjiilee fi dirreelee falmaa hunda irratti hojiitti jijjiiramee akka argamu bakkayyuu of-kenninsaa fi murannoon warraaqi. Heera/seera, qajeelfamaa fi karoora bahe hojiitti hiikuu fi kabajuun haalaan barbaachisaa dha. Wanneen hir’atan qabsoon guuttachaa malaa fi qaroominaan diinaa fi jaleelee diinaa jilbeenfachiisuuf jabaannee qabsaawuu dha.
Diinni keenya duula ifatti nu irratti geggeessu malee harka lafa jalaa fi tooftaa gara garaan tokkummaa ummata keenyaa diiguu,ololaa fi dantaa yeroon namoota keenya hawwatee of bira dhaabuun gurmuu keenya haphisuuf hirriba dhaba.Kanatti bayyanachuun akeeka diinaa hongeesuun barbaachisaa dha. Akkasumas humnoonni eenyummaa fi akeekni isaanii sichi adda bahu maqaa amantiin ummata keenya hiriirsanii kaan irraa adda baasuuf socho’uun ni mul’ata. Kanneen akkasittis dammaqi. Kan tokkummaa kee diigu kamiifuu gurra kennuu fi duukaa bu’uu irraa of eeggadhu.